प्रचण्ड सरकारकाे डाेजर हिलेका सुकुम्बासीमाथि,माअाेवादी सरकारकाे निसानामा सुकुम्बासी नै किन ? — OnlineDabali
प्रचण्ड सरकारकाे डाेजर हिलेका सुकुम्बासीमाथि,माअाेवादी सरकारकाे निसानामा सुकुम्बासी नै किन ?
सरकारले धनकुटाकाे हिलेका सुकुम्बासीमाथि उठिबास लगाएकाे छ ।
विना विकल्प सरकारले अाइतबार करिब ५० घरपरिवारका टहरमाथि डाेजर लगाएपछि उनीहरुकाे उठिबास भएकाे हाे । विगत २५ वर्षदेखि साेही स्थानमा बस्दै अाएका उनीहरुकाे विचल्ली भएकाे छ ।
गर्मी माैसममा समेच जाडाे हुने हिलेका सुकुम्बासी खुला अाकाशमुनि राति बिताउन बाध्य भएका छन् । चिसाेका कारण बालक-बद्धाहरु बिरामी परेका छन् । टहराभित्र रहेका खाद्यान्न र सत्ताकपड च्यापिएपछि उनीहरुलाई थप समस्या भएकाे छ । सुकुम्बासीहरु भाेकै चिसाेमा रात दिन बिताइरहेका छन् ।
माअाेवादीकाे नेतृत्वमा सरकर हुँदा किन सुकुम्बासीमाथि डाेजर लगाइन्छ ? तत्कालिन माअाेवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईकाे नेतृत्वमा सरकार हुँदा बागमति किनारमा जीवन गुजरा गरिरहेका सुकुम्बासी बस्तीमा डाेजर लगाइएकाे थियाे ।
त्यसकाे पाँच वर्षपछि फेरि माअाेवादी केन्द्रका अध्यक्षकाे नेतृत्वमा सरकार छ । यतिबेला नै धनकुटाकाे हिलेका सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले डाेजर लगाएकाे छ । सुकुम्बासीकाे अधिकारकाे कुरा माअाेवादीले उठायाे तर अहिले उनीहरुकाे व्यवस्थापन गर्नुकाे साटाे उठिबास लगाइरहेकाे छ ।
भारतीय हाइड्राेपावर कम्पनीले २० नेपालीलाई जेल हाल्याे